Wikipedia Soomaaliga waxaa ku jirta 5,153 maqaal, Hubi gaarista ama habka mobilka
2 Dhu al-Qi'dah 1439 H
Burcad badeedda geeska afrika waa tuugo maraakiibta afduubato. Waxeyna bilaabatay 2004tii, waa markii ay kaluumeesatada u dulqaadan waayeen maraakiibta shisheeye oo kaluunka ka xaluumeeysato xeebaha dalka iyo markii ay badda soo tuftay suntii nuclearka ahaa xiligii ay soomaaliya soo gaartay tsunaamigii ka dhacay qaarada aasiya.
Burcad badeeda waxey maanta dhib ku haayaan shacabka soomaaliyeed, waxaana taas ugu wacan lacagaha malaayiinta doollarka ah oo la siiyo burcad badeedaan waxey maraakiibta ka soo afduubtaan biyaha ka baxsan xeebaha soomaaliya.
Sida la ogyahay waddamo badan oo ka mida bahda loo yaqaan "dunida soo koraysa" ayaa waxay bar tilmaameed u noqdeen Burcadda sunta ku aasta dhulalkooda oo ay soomaalidu kamid tahay. Daraasad ay samaysay Jaamicadda la yiraahdo American University ee Washington (1996) waxay ku qiyaastay in hal tan oo qashin ah ay ku baxdo ilaa US$ 3000 marka ay noqoto in waddankii soo saaray nadiifintiisa iyo xafididdiisana u qalab-qaato halka ay haddii qashinkaas loo dhoofiyo dunida soo koraysa ay ugu kacdo waxaan ka badnayn US$ 5 (shan doolar) halkii tan-ba.
Soomaaliya kamid ma ahan wadamdii ku heshiiyey in ay isdhaafan karaan qashinka sunta halista ah sida aad map-ka aad ku arki doonto ee ku jira maqaalka markaad sii aqriso Blugga waxa uu cadeeynagaa wadamdii saxiixay in ay isku soo qaadi karaan sunta, Gaduudkana waxa uu muujinayaa in aan loo soo qaadi karin sunta, inta kasoo hartayna maba saxiixin.
Burcad badeeda 2011 ayeey hoos u-dhacday howlihii ay ka wadeen xeebaha soomaaliya waxaana lagu qiyaasaa bishiiba hal markab in ay afduubaan.
[[file:|Isbitaalka Hooyada iyo Dhalaanka ee Adna Aadan .|270px]]
Isbitaalka Hooyada iyo Dhalaanka ee Adna Aadan .
Wikipediyahaan waxaa ku qoran Af-Soomaali. waxaa la bilaabay 2001, hadda waxaa ku jirto in kabadan 5,153 oo maqaal. Luqadaha kale oo ugu waa weyn hoostaan ee ku tixanyihiin